फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य, कुनको कति ? Canada Nepal
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य, कुनको कति ?
काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । आइतबार नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो ।
अब पेट्रोल लिटरको १ सय २० रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेल लिटरको १०३ रुपैयाँ कायम भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत रहेको छ । यो मूल्य आज राती १२ बजेबाट लागू हुनेछ।
चैत्र २२, २०७७ आइतवार २०:५९:३५ बजे : प्रकाशित